Maitiro ekugadzira Vhidhiyo Yekushambadzira Yemukati Karenda | Martech Zone
Chishanu, December 10, 2021 Chishanu, December 10, 2021 Douglas Karr
Vhiki rapfuura, rimwe remapurojekiti andakaendesa raive nharembozha yekuongororwa kwemutengi. Nepo ivo vanga vachiita zvakanaka mukutsvaga padesktop, ivo vaive vasara munharembozha vachipesana nevakwikwidzi vavo. Sezvandakaongorora saiti yavo nenzvimbo dzevakwikwidzi, rimwe gaka muhurongwa hwavo raive rekushambadzira vhidhiyo.
Inopfuura hafu yemavhidhiyo ese maonero anobva kunharembozha.
Iyo nzira ndeye-multi-dimensional. Vatengi nemabhizinesi vanoita toni yekutsvaga uye kubhurawuza kuburikidza nenharembozha. Mavhidhiyo isvikiro rakakwana:
YouTube inoramba iri yechipiri pakukura injini yekutsvaga, iine mavhidhiyo akawanda anoonekwa kuburikidza nenharembozha.
YouTube ndiyo yakanakisa sosi yezvinongedzo kumashure kune yako saiti zvemukati kana yako YouTube chiteshi uye vhidhiyo yega yega inogadziridzwa zvakanaka.
Mapeji ako enharembozha, kunyangwe akadzama uye achidzidzisa, anogona kutyaira zvachose kuita nevhidhiyo inobatsira pairi.
Zvechokwadi, kugadzira a raibhurari yezvinyorwa yevhidhiyo inoda kufambiswa kwebasa kubva kune zano kuburikidza nekugadzirisa. Uye yako vhidhiyo zano rinogona kukomberedza zvakawanda mhando dzevhidhiyo kutaura nyaya yerudzi rwako zvine mutsindo. Karenda yako haifanire kungova iyo musoro uye zuva rekuburitsa, inofanirwa kusanganisira iyo yese mafambiro ebasa, kusanganisira:
Mazuva ekuti vhidhiyo yako inofanira kupfurwa, kugadzirwa, kupepetwa, kuburitswa, kuburitswa uye kusimudzirwa.
Ruzivo rwemapuratifomu kwauchange uchitsikisa mavhidhiyo ako.
Tsanangudzo pamhando yevhidhiyo, kusanganisira pfupi-fomu mavhiri kuburikidza neyakadzama nzira-yekuita.
Kwaunogona kunyudza nekusimudzira mavhidhiyo ako, kusanganisira mamwe macampaign anogona kuabatanidza.
Unoyera sei kukanganisa kwemavhidhiyo pakushambadzira kwako kwese.
Sezvakaita chero mushandirapamwe wekushambadzira, ndingashandisa a rondedzero yakanaka yekuronga buritsa pfungwa yako kuitira kuti iwe ugone kuwedzera maitiro ekushambadzira kwevhidhiyo yako. Nepo vhidhiyo ingangoda zvimwe zvekuwedzera munguva nemari, kubhadharwa kwevhidhiyo kwakakosha. Muchokwadi, ndingapokana kuti uri kurasikirwa zvachose chikamu chakakosha chevako vangangove vatengi nekusabatanidza vhidhiyo mune yako yese nzira yekushambadzira.
Mune ino infographic, Imwe Zvigadzirwa inopinda mune zvese zvaunoda kuziva nezvekuronga uye kuronga zvemukati zvevhidhiyo yako nemakarenda emukati. Vanotsanangura kuti kushandisa karenda yemukati kunogona kubatsira sei kuvandudza mashandiro evhidhiyo yako. Kune zvakare mamwe epamusoro manzwisisiro kubva kuvatungamiriri vemaindasitiri ekuti maitiro ndiwo kiyi yekubudirira kwemaitiro ako ekushambadzira zvemukati.
Tags: sei kutiinfographicchigadzirwa chimweVideo contentvhidhiyo yemukati kalendarivhidhiyo yemukati zanovhidhiyo kushambadziravhidhiyo kushambadzira infographicvhidhiyo kushambadzira zano